ABAALKII UGU QURUXDA BADNAA OO AY LABA WIIL OO SAAXIIB AHAA ISKU GALEEN! W/Q: Suldaan Nayruus | Laashin iyo Hal-abuur
ABAALKII UGU QURUXDA BADNAA OO AY LABA WIIL OO SAAXIIB AHAA ISKU GALEEN! W/Q: Suldaan Nayruus
Dhawr subax oo isku xiga ayuu arkayey saaxiibkiis oo uu ka muuqdo isbeddel uusan u bogin. Dhaashnaantii iyo istaaggii lagu arki jiray ma leh, oo isaga oo aan isa soo tirtirin, oo aan isa soo hagajin ayuu yimaadaa iskoolka. Ma leh firfircoonaantii uu ku yaqaannay. Lagu ma arko kaftankii iyo foorjayntii uu caanka ku ahaa. Su’aalihii badnaa ee uu macallimiinta weydiin jiray ma jiraan. Ma ahan sidii lagu garan jiray ee intuu farta taagto uu jawaabaha u la degdegi jiray, kolka uu macallinku ardayda wax weydiinayo. Waayadan waa ka soo daahaa casharka, oo qaabkii hore uma yimaado fasalka.
Marka uu soo aadayo ischoolka, ardayda xaafaddiisa ayuu soo raaci jiray, laakiin maalmahan, keligi baa yimaada isaga oo niyadjabsan, oo lugta jiidaya. Xilliga biririfta, waa kii isaga iyo saaxiibbadi inta israacaan ay afka wax soo wada gelin jireene, hadda fasalka ayuu iska sii fadhiyaa, inta ay ardayda oo dhan soo laabanayaan. Kolka uu baxayo, ardayda ay isku xaafadda yihiin ayuu horay baska u la qabsan jiray e, sida marka uu imaanayo oo kale, ayuu keligi iska tagaa. Habkii caadada u ahayd maalmaha fasaxa toddobaadka ee la kulanka saaxiibbadiis iyo ciyaartii kubadda, waa joojiyey.
Samatar oo ahaa saxiibkiisii ugu dhawaa, ayaa markii uu arkay isbeddelka yaabka leh ee ku yimid Geelle, dhawr jeer si guud wax uga wey weydiiyey, laakiin Geelle uusan jawaab saxa ka bixin, kana meermeeray in uu si cad uu ugu warramo.
Samatar oo ay arritani saamayn ku yeelatay maadaama saaxiibkiis Geelle si wax ka yihiin, ayaa maalintii dambe go’aan ku gaaray in uu inta saaxiibki kaxeeyo, uu geeyo meel makhaayad ah, oo inta wada qadeeyaan, uu si dhab ah u weydiiyo meesha saaxiibkiis laga asiibay. Inta hooyadi lacag uu warsaday ka soo qaatay, ayuu maalin, markii fasalkii laga baxay duhurkii, ka codsaday, kuna adkeeyey in uu raaco, taas oo uu markii dambe aqbalay Geelle. Sidii uu u sii waday, ayuu geeyey makhaayad heer sare ah.
Markii ay wada qadeeyeen, ayaa Samatar waxa uu ku yiri saaxiibkiisa Geelle, “Saxiib Geelle, waad i taqaan oo waxa aan ahay saaxiibka kuugu dhaw ummaad oo dhan. Waad og tahay, laga soo bilaabo dugsi dhexe ilaa hadda oo aan ku jirno fasalka ugu dambeeya ee dugsigan sare ee Banaadir, waxa aan ahayn saaxiibbo dhib iyo dheefba wadaaga. Saaxiib, muddooyinkaan dambe sidaadii hore ma tihid, waxaa kaa muuqata murugo aad qarinayso oo saameyn kugu yeelatay, anna si’ ii taabatay, maadaama aan kaa waayey wixii aan kugu aqoon jiray. Saaxiib Geelle, dhawr jeer baan arrintan wax kaa weydiiyey, laakiin wax sax ah aad ii sheegi weyday, taasi wallaahi kurbo kale ayey igu abuurtay. Waxa aan mar kasta is weydiiyaa dhibka kugu soo kordhay iyo sababta aad iiga qarinayso. Miyaannaan Geelle saaxiibkaa ahayn? Miyaadan aaminsanayn waxa kugu dhaca in aan kula dareemayo? Geelle, waxa aan maanta halkaan kuu keenay, in aad si dhab ah iigu warranto.”
Wiilkii Geelle ahaa isbeddel ayaa uu ku keenay hadallada saaxiibtinimo ee ka imaanaya laab u xaaran. Ma uusan jeclayn in arrinta dhibaysa uu cidna la wadaago, laakiin hadallada saaxiibki oo maankiisa ruxay darteed, waxa uu go’aansaday in uu saaxiibkiis la wadaago arrinta ku soo korartay, markaas buu ku yiri, “Walaal, waan ogahay, waana aaminsanahay in aad tahay saaxiib qaaliya oo aan jeclahay. Saaxiib ma doonayn in aan kula wadaago waxa igu soo kordhay, sababta oo ah waxa aan ka baqayey, in dhibka aan dareemayo aadna aad dareentid, oo aan labadeennaba culays ina fuulo. Waxa aan rabay in ay keligay igu ahaato, adna farxaddaada ku noollootid saaxiib. Haddii aad igu qasbayso in aan ku sheego, waan kaaga warramayaa. Saaxiib aabbahay Faarax ayaa waa dhaweyd dawladda inta qabatay ay xiratay. Maannaan aqoon sababta loo xiray, laakiin maalin na loo oggolaaday in aan soo booqanno ayaa aniga, hooyo iyo gabadha iga weyn ee walaashay ah, ugu tagnay xabsiga, kolkaas buu noo jeediyey dardaaran uu muuqday in aannan mar dambe arki doonin, waxna waa inoo sheegi waayey. Annaga oo murugeysan baan ka soo tagnay. Arrinta loo xiray baannu meelo kale ka raadinnay, kolkaas baan soo ogaannay, in aabbe uu ka shaqeysan jiray hawlo uusan Kacaanku oggolayn, taasina keeni karto in la daldalo. Saaxiib, arrintaa baan waayadan la murugeysnaa, taas oo na haysata, ayaa misena noloshii guriga hoos u dhac weyn ku yimid. Isaga ayaa il inoo ahaa, isagiina waad aragtaa.”
Intii uu hadalka ku jiray, ayaa Samatar aad uga calool xumaaday dhibka gaaray aabbaha wiilkaasi iyo saamaynta murugeed iyo midda nololeed ee uu reerka ku yeeshay. Markii uu warkii ka baxay, ayaa Samatar ku yiri Geelle, “Saaxiib, aad iyo aad baan uga xumahay arrinta naxdinta leh ee aad ii warisay. Nin rag ah baan ahay, oo waan isku dayin in aan wax kaala qabto dhan walbaba. Saaxiib, aabbahay ayaa dawladda ka tirsan, nin adeerkay ahna madax sare ayuu ka yahay, waxa aan awoodda saarayaa sidii aabbe xabsiga uu uga soo bixi lahaa, inta hawhaasi socotana, reerka masruufkiisa aan meel saaro, adna ii soo ducee.” Geelle oo niyaddu u qabawday misena la yaabay hadalka Samatar, ayaa ku yiri, “Saaxiib, aad baad u mahadsan tahay. Aad baan ugu faraxsanahay garab istaaggaagaas, in kasta oo aanan aqoon sida ay arrintaasi ku suuroobi karto.” “Saaxiib waan dadaalayaa, ii soo ducee adigu, haddana waan ku fasaxayaa.” Sidaas baa lagu kala tagay.
Samatar, sidii uu u socdayba, gurigoodii ayuu tagay, isaga oo aad uga tiiraanyeysan sheekadii saaxiibkiis Geelle. Ilaa markhribkii, intii uu aabbihi ka imaanayey, waxa uu ka fekerayey sidii uu aabbihi uga dhaadhicin lahaa arrinta aabbaha Geelle, oo uu ku geli lahaa. Sidii uu u fekerayey baa aabbihi yimid makhribkii.
Sida caadada u ahayd, cishihii ayey isaga iyo abbihi miiskii ay tageen ku wada casheyn jireen. Markii ay cashadii bogteen, ayaa sidoodii misena xaalka iska wareysteen maadaama ay ahaayeen wiil iyo aabbihi saaxiib ahaa oo is xog wareysta. Samatar ayaa aabbihi Jaamac ku yiri, “Aabbe, caawa sidii hore ma ihi, aad baan u murugeysanahay, u welwelsanahay!” “Aabbe, maxaa dhacay, ii sheeg waxa jira, aniga ayaa ku jecel, wax walbana kula qabanayee?” Ayuu odayg ku yiri. Samatar baa markaas afka furtay, “Aabbe, wiilkii saaxiibkay ahaa ee aad taqaannay ee ahaa Geelle ayaa aabbihi Kacaanku xiray. Geelle waa saaxiibkay qaali ah oo aan aad u jeclahay. Xabsi iyo dil buu ku xukuman yahay baa la yiri. Saaxiibkay iyo reerkoodii welwel iyo dhib adag bay xaaladdoodii gashay. Reerkii xitaa masruuf ma haystaan, oo adaygii siin jiray waa tan la xiray. Aabbe arrintaasi ayaan doonayaa in aad na la furdaamiso. Haddii aad yeesho, aabbe inta odaygaasi xaalkiisu meel u dhacayo, reerka waa biil la’yahee, fadlan arrintaasina na la maaree.”
Odaygii, inta uu hadalka wiilka dhagaysanayey baa inta shucuurtiisii isbeddeshay, buu waxa wiilkiisii ku yiri, “Aabbe, caqliga iyo garaadka ayaan kugu jeclahay. Aabbe, codsi dhankaaga iiga yimaada waan ku khasbanahay in aan sida uu yahay u fuliyo. Aabbe, arrintaas waan galayaa, saaxiibkaana waan gacan qabanayaa. Waan aqaan Geelle, waa saaxiibkaa, anna waa jeclahay cid kasta oo aad jeceshahay. Aabbe, berriba lacag fiican baan kuugu dhiibayaa saaxiibkaa, si ay reerka masruuf uga dhigtaan bishan. Odaygana waan soo ogaan xaalkiis.” “Aabbe odayga magaciisa ii sheeg.” Ayuu weydiiyey Samatar. “Abbe waxaa la yiraahdaa Faarax Salaad Cabdi.” Ayuu wiilkii ugu jawaabay. “Aabbe igu hallee arrintaasi, aniga ayaa war kaa soo siine.” Ayaa odaygii war ku soo gebagebeyeey. Samatar oo farxay ayaa inta abbihi dhabannada ka shumiyey, ku yiri, “Aabbe, aad baad u mahadsan tahay, waan kugu ogaa garashada iyo gacanqabadka.”
Subixiiba, Samatar oo lacag badan wada ayaa iskoolkii kula kulmay Geelle, oo is la markiiba lacagtii ku wareejiyey, lana socodsiiyey warbixintii isaga iyo aabbihi dhex maray. Geelle markii uu arkay lacagta farabanideeda iyo warbixinta qalbi qaboojinta ah ee uu siiyey saaxiibkiis Samatar, buu inta laabta geliyey, ku yiri, “Saaxiib, ma garanayo waxa aan kuugu abaalgudo.” Inta cabbaar laabta ku hayey oo ilmeeyey, ayuu ku yiri, “Aad baad u mahadsan tahay, saaxiib qaali ah.”
Jaamac, subixii waxa uu raadiyey macluumaad ku saabsan Faarax Salaad, kolkaas buu soo ogaaday in uu ku eedaysan tahay fal ka dhan ah Kacaanka oo halis ah. Waa nin ay riixayso murugada wiilkiisa iyo saaxiibkiye, waxa uu feker dheer ka dib go’aansaday in uu suudaaliyo. Rag madax ahaa inta la kaashaday ayaa Eebbe 35 cisho ka dib, u fududeeyey in ninkaasi la cafiyo, oo la siidaayo. Maalmaha hawsha siideyntiisa lagu jiray, Faarax, aad buu uga yaabbanaa cidda uusan garanayn ee u shaqeynaysa! Markii la siidaayey, ayaa waxa gaarigiisa ku soo kaxeeyey Jaamac, kolkaas buu ku yiri, “Walaal, ninka ku siidaayey waa aniga, aqoon kuuma lahayn, laakiin wiilkaaga iyo wiilkayga ayaa ah saaxiibbo dhab ah, wiilkayga oo murugaysan ayaana arrintaada i soo gaarsiiyey. Sidaas baan hawshaada ku soo galay. Reerkiina, masruufkiisii aniga ayaa meel sii saaray.” Faarax, inta dubaaxiyey oo jiriricooday oo qalbigiisa naxriisi rushaysay, baa inta indhahiisii ilmo buux dhaafisay, uu ku yiri, “Jaamac, arrintani waa arrin aanan weligey arag. Walaalo, wax aan dhaho ma aqaan, aad baad u mahadsan tihiin adiga iyo wiilkaagaba.” Inta dareenkiisii uu xakamayn waayey, ayaa hadal kale ka soo bixi waayey. Gurigiisii inta geeyey, buu ka soo laabtay Jaamac. Faarax, markii uu gurigii gaaray, ayuu u tagay reerkii oo noloshoodii u dhammaystiran tahay. Maxaa raashin iyo faakihaysi kala duwan yaalla!
Geelle, markii uu arkay sida gobanimada leh ee uu ula shaqeeyey Samatar, waxa uu in muddo ah ka fekerayey, waxa uu ugu abaalgudo, kolkaas buu waxa ku soo dhacday in uu Samatar siiyo gabadha ka yare ee aadka u quruxda badayd ee Filsan. Inta iyada soo qalqaaliyey, ayuu saaxiibkiisna siiyey. Kolkaas baa labada qoys ba, inta aad ugu farxeen si siman uga qeyb qaateen arooska. Maadaama Samatar uu wax baranayey, masruufka reerka, labada odayba waa bixin jireen.
Saaxiibtinimadii, labada wiil kuma ekaane, waxaa sidaas oo kale saaxiibay oo aad isku jeclaaday labadii oday, waxaa sidaas oo kale saaxiibay labadii xaas iyo carruurihii oo dhan, kolkaas bay noqdeen laba qoys oo wada dhashay oo kale.
Sidii ay saas u ahaayeen, ayaa dagaalkii sokeeye dhacay. Alle amarki, qoyska Geellana waxa ay isku abtir noqdeen qolada Xamar soo galaysay, kuwa Samatarna waxa ay noqdeen qolada Xamar ka baxaysay. Geelle iyo aabbihi Faarax, waxa ay dusha saarteen, in qoyska Samatar iyo qosaska kale ee qaraabada la ah aysan wax dhib ah gaarin. Inta 15 qoys oo kii Samatar iyo kuwii qaraabo la ahaa ba, hal xaafad isugu geeyeen ayey waardi ka ahaayeen, kolkaas baa cid u soo dhawaata la waayey, iyaga ay ku jireen weliba madax muhiim ahayd. Waardiye keliya kama ahayne, xitaa noloshooda ayey dhabarka saarteen. Xaafadda oo dhan waxaa looga yaqaan reerihii Geelle iyo Faarax, oo cid soo fiirasaba la waayey. Mar baa gabar cidahaas ka tirsanayd, oo suuqa adeeg u doonatay wiil soo faduuliyey, kolkaas bay Geelle u sheegtay, waaba la ogaa dhibkii qabsaday wiilkaasi.
Qeybo ka mid ah reerahaasi, oo horay u dhoofay baa codsaday in ay yimaadaan Nayroobi, si ay uga wadaan, kolkaas baa Geelle iyo Faarax inta gaariyaal u kireeyeen bay geeyeen ilaa xadka Kenya, iyaga oo aan cid kale ku aaminin.
Reerkii Samatar waa dhoofay, kolkaas bay ayaan ka dib, u soo dacawoodeen reerkii Geelle, oo ay Mareykanka isla tageen. Markii ay Mareykanka isugu tageen, ayaa Samatar oo ka naxay doobnimada uu ku weynaaday saaxiibki Geelle, waxa uu siiyey gabadha uu ugu jeclaa walaalihiis ee Hodan.
Ilaa hadda, Samatar iyo Geelle la is kama ag waayo, ma kala haraan oo, indhahooda waa iska jecelyihiin. Labadii reer, ilaa waagaas waa walaalo saaxiib ah oo aad isku jecel.